mardi, 06 mars 2018 18:02
08 marsa - Mahajanga: Hojerena manokana ireo reny tera-bao
Hanamarika ny fankalazana ny Andron’ny vehivavy eto Mahajanga amin’ity taona ity ny fanolorana fanomezana ho an'ireo reny tera-bao sy ny zaza teraka manomboka ny segaondra voalohany ny andron’ny 08 marsa.
Ny fanamarinana avy amin'ny mpampivelona sy ny kaopia avy aminy Kaominina no enti-manamarina io fahaterahana io.
“Hifampitaona eny aminy Kianja 29 marsa eny amin’ny zaridaina Kayla ireo andriambavilanitra io andron’ny 08 marsa io, ary hanao diabe miazo ny Complexe Sportif Ampisikina, toerana hanaovana ny ivon'ny fankalazana sy hanaovana ny totorebika”, hoy i Mizza Anni, filohan'ny fikambanam-behivavy ny 08 marsa eto Mahajanga.
mardi, 06 mars 2018 17:53
Doany Miarinarivo Efadahy manankasina Tsararano Mahajanga : Nesorina tamin'ny toerany ny Fahatelo
Nampiantso mpanao gazety ireo taranaka avy any amin'ny Doany Betsioky, nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny fanesorana an'i Hasindrazana Édouard tsy ho Fahatelo intsony ao amin'ny Doany Miarinarivo Efadahy Manankasina. Efa misy, raha araka ny fanazavana, ny olona voatendry ho solony.
Maro ireo fomban-drazana sy fandikan-dalàna nataon'ity farany ka izay no antony nanoloana azy, mba tsy hiteraka olana indray toy ny tamin'ny taon-dasa. Efa nanambara io fanesorana azy io ihany koa ny ampanjakaben'i Boeny Soamody ny sabotsy lasa teo saingy tsy nekeny izany ka izao nanaovan'ny delegasiona avy any Betsioky bemidina izao.
Mizotra amin'ny antsakany sy andavany ny fanompoana rehetra eny amin'ny Doany ary efa hiroso amin'ny fombafomba atao mialoha ny fanompoambe na Fitampoha atsy ho atsy.
mardi, 06 mars 2018 17:51
Vacance d’un siège de député: L’Assemblée Nationale saisit la HCC
La lettre, ayant pour objet vacance d’un siège de député à l’Assemblée Nationale, suite au décès de Abdillah, Député élu dans le District de Vohémar, Région SAVA, est arrivée à Ambohidahy hier.
mardi, 06 mars 2018 12:08
Tiko AAA: Des vaches qui meurent de faim
Les vaches dans la ferme de Tiko AAA à Andranomanelatra souffrent et meurent petit à petit.
Fitsarana: Nametraka fangatahana didy fandravana ny Procureur Général nesorina tamin'ny toerany
Nametraka fangatahana didy fandravana teny amin'ny fitsarana ireo mpisolovava ny Procureur Général près la Cour Suprême (PGCS) Ranary Robertson Rakotonavalona, izay nesorin'ny fitondrana tamin'ny toerany.
Milaza ireto farany fa dia mandika lalàna ny fitondram-panjakana sy ny mpitarika azy manoloana izao fanalana ny Procureur Général izao ary tokony ahazo fampiantoana amin’io fampiarana io didy io.
mardi, 06 mars 2018 08:18
Arfagate: Namarinin'ny Kaomisionina etika fa madio ny minisitry ny fitsarana
Nampiantso ny mpanao gazety tamin'ny zoma 02 mars lasa teo ny kaomisionina momba ny etika eo anivon'ny ministeran'ny fitsarana momba ny raharaha Houcine Arfa.
Voalaza tamin'izany fa efa nohainoin'ity kaomisionina ity ny minisitry ny fitsarana izay nizingizinin'i Houcine Arfa fa nandray vola 70 000 Euro taminy, nohainoina ihany koa hoy hatrany ity kaomisionina ity ny Mpampanoa lalàna izay anisan'ny voalaza fa nandray vola ihany koa.
Raha ny vokatry ny fanadihadiana nataon'ity kaomisionina etika ity, dia madio ny minisitry ny fitsarana sy ny Mpampanoa lalàna.
Carlton: Assises de la coopération internationale des collectivités Malagasy et Française
Notanterahana omaly alatsinainy 05 marsa tetsy amin’ny Carlton Anosy ny fanokafana tamin’ny fomba ofisialy ny 2ème assises de la coopération internationale des collectivités Malagasy et Française, izay notarihin’ny filoham-pirenena Hery RAJAONARIMAMPIANINA ny tolakandro.
Nisy ny fifanaovan-tsonia teo amin’ny minisitry ny raharaham-bahiny Henry RABARY NJAKA sy ny ambasaderan’ny la Frantsa Ramatoa Vouland-Aneini.
Nahita ilay Ben'ny Tanàna nivory niaraka tamin'ny frantsay 200 omaly aho dia tohina ny fo, nahoana loatra re dia lasa zana-tany ohatr'izao isika Malagasy, ka dia nisy maire malagasy mihitsy aza nangataka tamin'ny Frantsay hoe ampio izahay ahazo fahefanana bebe kokoa fa voagejan'ny fitondrana foibe izahay.
Any ve no tokony itakiana an'izay? Ohatr'izao ve no hitondrana ny tena rafitra hitsinjaram-pahefana na hifampizarana andraikitra?
Mandiniha tena isika fa ny fahaleovatenam-pirenentsika mihitsy no atakalo izay lazaina fa fanampiana sy fiaraha-miasa amin'ny Firenena avy any ivelany.
Ampy hampandrosoana ny Firenentsika sy ny vahoaka Malagasy ny Olona manam-pahaizana sy ny Harena eto amintsika, aoka hiainga avy eto anatiny ny fifehezana ny volantsika, ny harentsika, ny any ivelany manaraka fotsiny izany.